पुल र सडक जोगाउन प्रयासरत छौं : डिई बम – Sadarline
गत साउनको अन्तिम साता देसभर आएको अबिरल बर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले धनजनको मात्र क्षती गरेन्, विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक सन्जाल बिच्छेद भए । सडक सन्जाल बिच्छेद भएपछि आवातजावत पनि बन्द भयो । बर्षेनी आउने बाढीले सडक र पुलहरुमा यस्तै समस्या आइरहन्छ । यसको समस्या र समाधानका उपायका बिषयमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख अर्जुन बमसंग सदरलाइनडटकम का लागि कमल डाँगीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
१. बाढीले यहाँको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने पुल र सडकहरुको क्षतीको अबस्था के छ ?
– महेन्द्रराजमार्ग, नेपालगन्ज गुलरिया सडकखण्ड र रत्नराजमार्गमा बाढी र पहिरोेले पुल, सडकमा समस्या सिर्जना भयो । केहीदिन सडक आवातजावन अबरुद्ध गर्नुपर्ने अबस्था आयो । महेन्द्रराजमार्ग अन्र्तगत बांकेमा पर्ने गन्धैली नाला, गाभर, पोरुवा, मुगुवाक्षेत्रका पुलहरुको स्ल्याब बगायो । रत्नराजमार्गमा पहिरोले सडक अबरुद्ध भयो । नेपालगन्ज–गुलरिया सडकखण्डमा भादा पुल, पेडारी खोलामा सडकक्षेत्रमा बाढी आउदा सडक भासिएको छ ।
२. सडक र पुलको अहिलको अबस्था कस्तो छ ?
–पुल र सडकहरुको मर्मतको काम गरेर हामीले सडक सुचारु गरिसकेका छौं । सडक अबरोध कतै छैन् । कते अस्थायीरुपमा समस्याको समाधान गरेका छौं भने कतै स्थायी समाधानका लागि कामहरु गरिरहेका छौं ।
३. स्थायी समाधान भनेको के हो ?
–पुलहरुको संरक्षण कसरी गर्ने ? सडकक्षेत्रमा जसरी बाढी आइरहेको छ त्यसलाई कसरी रोक्ने र आइहाले क्षती कसरी कम गर्ने ? दिर्घकालिन समाधान भनेकै यही हो । जस्तो बांकेको खजुरामा पार्ने पेडारीखोलामा लामो पुल बनाउने प्रस्ताव भएको छ । अहिले छोटो पुल भएका कारण त्यहां पानीको निकास सम्भव भएको छैन । अनि सडकबाटे पानी बग्छ तर अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि नयां पुलको प्रस्ताव गरिएको छ ।
३. हरेक बर्ष एउटै ठाउका पुल सडकहरु भासिन्छ , स्थायी समाधान किन हुन नसकेको होला ?
– यसको समाधान अब हामी गर्छौ । राजमार्गक्षेत्रमा जति पनि पुलमा समस्या भएको छ त्यसको समाधान खोज्र्छौ । राजमार्गक्षेत्र बांके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । निकुन्ज र पुल वरपर रहेका रुखहरु बर्षातका बेला ढलेर नदीको बहाब नै रोक्ने गरेको पाइयो । पानीको बहाब रोकिएपछि त्यो पानी पुलको वरपरबाट जान खोजेर स्ल्याब भत्काउने गरिएको पाइयो । तराईको नदी भनेकै कतिबेला कहांबाट धार परिवर्तन गर्छन भन्ने थाहा हुदैन, झन् त्यसमा नदी रुखहरुले थुनिदिदा समस्या भइरहेको छ ।
४. समाधान के हो त ?
– पुल वरपर रहेका जोखिमयुक्त रुखहरुको ब्यवस्थापन गर्न निकुञ्जसंग आग्रह गर्छौ । निकुञ्जले सहयोग गर्ने आशा लिएका छौं । यसका साथै नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन नगरोस् भन्नका लागि संरक्षणको उपाय अपनाउछौं । जस्तो तारजाली लगाउने ।
५. राजमार्गक्षेत्रमा रहेका पुलहरु जिर्ण अबस्थामा छन् की नाई ?
–दिर्घकालिन योजनासहित पुलहरु बनाइएका हुन्छन् । त्यसै भत्किने कुरा हुदैन । त्यसकारण यसक्षेत्रमा पुलहरु जोमिखयुक्त छैनन् । समय समयमा मर्मत, सम्भार गर्दै आएका छौं । पुलहरु भत्किने कुरा भन्दा सल्याबहरु भत्किने चिन्ता छन् जो हामी समाधान गर्छौ । बरु नेपालगन्ज–गुलरिया सडकखण्डका पुलहरुमा समस्या आउने देखिएपछि समाधानका लागि सुधारको कामहरु चाढै गर्छौ ।
सदरलाइनडटकम १४ भदौ, नेपालगन्ज : बल पूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले आफूहरुलाई अन्यौलमा नराख्न राज्यसँग आग्रह गरेका छन् । राज्य तथा गैर राज्यबाट बेपत्ता परिएको (२०५१–२०६२) सम्मको समयमा बेपत्ता परिएकाहरुको राज्यले अवस्था सार्वजनिक नगर्दासम्म आफुहरु अन्यौलमा परेको परिवारजनको गुनासो छ । शन्ति प्रकृयामा […]